Calcium carbonate inhibitor HEDP•Na4 granular
Heerarka Cunnada Caanaha Cad ee Waxtarka Ka-hortagga ah ee Sare...
Udgoon saabuun Ethyl Phenyl Acetate CAS Lambarka: 101-97-3
dheehidda warshadaha Sodium alginate Thickener
polyhexamethylene biguanide jeermis dilaha guanidine 2 ...
Lithium Nooca Molecular Sive usd ee oxygenerator
Dhexdhexaadiyayaasha Daawada 3′-Nitroacetophen ...
Daawada Dhexdhexaadka ah Diethyl oxalate CAS Maya: ...
Daawada Dhexdhexaadka ah histamine Dihydrochlorid ...
Dhexdhexaad Pharmaceutical Glutaric Anhydride CAS N ...
Cuntada lagu daro Cuntada Inositol 98% Powder - Inos ...
Anti-L daminta xumbo wakiilka 6% S / AR
Gaadiidka: Badweynta, Dhulka
Awoodda Bixinta: 500 MT/Bishii
U dir email noo U soo degso sida PDF
Baako: 200kg / Durm
Wax soo saarka: 500 MT / Month
Gaadiidka: Ocean, Land
Iyo meesha Asal ahaan: china
Supply Kartida: 500 MT / Month
Nooca 6% of anti-L xumbo Fire deminta Agent waa wakiilka dab aad u waxtar fiican bay'adda deminta. Its caan ku yahay in xumbo sameeyay sameysmi karaa filim ka ilaaliya on dusha sare ee shidaalka kala horjeeda dareere ah, iyo film ka la waxyeello loo ilaaliyo karaan xumbo sare iyo sidaas ka ciyaaraan door ah daminta dabka. Waxa aan ku damiyaan karaa oo kaliya dabka lagu shido dareere kala horjeeda, laakiin sidoo kale loogu demiyo dabka lagu shido saliidda. Shayga damiyaa ⅢC heerka daminta dabka dab dareeraha nonpolar iyo ARⅠB dab bakhtiinta dabka dareeraha ah. Sidaas waxa uu leeyahay dabeecadda a multi-functional.
Number Standard Fulinta: GB15308-2006 " dab deminta xumbo wakiilka "
Jinka huruud Light
Saamiga (20 ℃ ), g / cm3
Anti-keydsho, waxqabadka barafka
No stratification la arki karo iyo heterogeneity
Flow waa ka weyn yahay xalka tixraaca caadiga ah
badan ka xumbaynaya
weecasho ayaa ka eigenvalue ah kama weyna 1.0 ama kama weyna eigenvalue 20% ay
25% waqtiga dheecaan .min
Fogaanta dhexdeena ka qiimaha caan ma aha in ka badan 20%
E waqti xtinguishing (acetone), min
Anti-gubanaya waqti (acetone), min
waqti Deminaya (120 # saliid dareeraha), min
Kabka Strong ≤ 3, kabka gaabis ≤ 5
Anti-gubanaya waqti (120 # saliid dareeraha), min
Gaabis ah ha loo sii daayo ≥ 10
Dhibic lagu keydsho, ℃
Muddo eigenvalue - 4 º
Heerkulka Operating, ℃
dhibic lagu keydsho +5 ~ 40
Wakiilka dab deminta waxaa loo isticmaali karaa in noocyo kala duwan oo ah nidaamka daminta dabka low-ka xumbaynaya iyo biyo cusub by 6:94 xumbo ratio dab la isku qasin. Si ballaaran loo isticmaalo dhirta waaweyn kiimikaad, dhirta fiber kiimikada, Shirkadaha saliidda, dab kiimikada alaabta bakhaar iyo meelaha kale ee ilaalinta. Alaabta Tani waa mid deggan, oo aan sun ahayn, non-xoqe, sida lasoo galay indhaha ama maqaarka, biyo ugu maydhaa.
xal Tani dab-demiska wakiilka stock waa in lagu kaydiyaa heerkulka daarmayaay'e hoos ku 45 ° C iyo wixii ka sareeya heerkulkiisa adeegga ugu yar. Shayga waxaa laga shaabadeeyey laba iyo kaydiyaa deegaanka kor muddo laba sannadood.
Raadinta xumbo fiican deminta Agent saaraha & qeybiyaha? Waxaan leenahay xulashada ballaaran ee qiimaha weyn inuu kaa caawiyo inaad hesho hal abuur leh. All xumbada Anti-L deminta Agent yihiin tayada damaanad qaaday. Waxaan nahay Shiinaha Asal Factory of Noocyada xumbo Demiyeyaasha. Haddii aad qabto wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Categories Product: deminta Powder
Previous: High-khayroon daahirnimo granular calcium chloride / budada
Next: aluminium ammonium sulfate
6% biyo-sameynta dab deminta xumbo wakiilka
Wakiilka daminta dabka budada qalalan ABC (75)
Environmental ABC daminta dabka budada qalalan ...
ABC budada superfine wakiilka daminta dabka
Wakiilka ABC dab budada qalalan daminta (50%)
Codsiga sodium thiosulfate ee aqua...
hal usbuuc oo la soo shubayo Sodium thiosulfate
Xaalada dagaal ee u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine...
Maxaad uga fikiraysaa inaad ku darto polydextrose...
xirxirida monosodium glutamate 40 mesh